न्यादी हाइड्रोपावरको रु. २२.५ करोडको आईपीओ असोज १५ बाट निष्कासन हुने Bizshala -
न्यादी हाइड्रोपावरको रु. २२.५ करोडको आईपीओ असोज १५ बाट निष्कासन हुने
काठमाण्डौ । न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडले यही असोज १५ गतेबाट रु. २२ करोड ५० लाखको आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ।
कम्पनीले १०० अंकित दरका कुल २२ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कुल कित्तामध्ये २ प्रतिशतले हुन आउने ४५ हजार कित्ता कर्मचारीका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने ५ प्रतिशतले हुन आउने १ लाख १२ हजार ५०० कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। बाँकी २० लाख ९२ हजार ५०० कित्तामा सर्वसाधारणले आवेदन दिन पाउनेछन्।
न्यादी हाइड्रोपावरको आईपीओमा सर्वसाधारणले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतममा ५० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ। यो आईपीओको निष्कासन बन्द छिटोमा असोज १९ गते र ढिलोमा असोज ३१ गते बैंकिङ समयपछि हुनेछ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि–आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थारु र तिनका शाखा कार्यालयका साथै मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सकिनेछ।
कम्पनीले गत साउन ११ गते धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ निष्कासन अनुमति पाएको थियो। सोहीअनुसार पहिलो चरणमा कम्पनीले गत भदौ १ गतेदेखि भदौ १५ गतेसम्म आयोजना प्रभावित लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका स्थानीय र लमजुङका अन्य क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाका लागि गरी १५ लाख कित्ता आईपीओ बिक्री गरिसकेको छ।
कम्पनीको यो आईपीओ बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ।
कम्पनीले लमजुङ जिल्लामा ३० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। प्रतिमेगावाट लागत अनुमान २० करोड ३९ लाख २५ हजार रहेको छ। कुल लगानी अनुमान ६ अर्ब ११ करोड ७७ लाख रहेको छ। साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि ७.७३ वर्ष तथा डिस्काउन्टेड लगानी फिर्ता हुने अवधि १३.८२ वर्ष रहेको छ।
Nyadi Hydropower Limited IPO
आजसम्म कायम सेयरधनीहरुले कामना सेवा विकास बैंकको १८.५% बोनस
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंकले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव...
पहिलो त्रैमास एनआईसी एशिया क्यापिटलको व्यवसाय उत्साहजनक
काठमाण्डौ । एनआईसी एशिया क्यापिटलले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को...
बजारमा करेक्सन सकिएकै हो ? यस्तो छ पहिले र अहिलेको बढाइमा
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । यो साताको दुई कारोबार दिनमा...
लगानीकर्ताका नेता भन्छन्–‘बजार जति घट्नु घटिसक्यो, अब बढ्ने
– अनन्त्य सुन्दर काठमाण्डौ । केही समयदेखि लगातार घट्दो क्रममा...
सामलिङ्ग पावरको आईपीओ अन्तिम दिनसम्म ३९.६७ गुणाले �
काठमाण्डौ । सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेडको आईपीओ निष्कासनको...
नगद लाभांश सेयरधनीको बैंक खातामा पठाउँदा आवश्यक विवरण खुलाउन
काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नगद लाभांश सेयरधनीहरुको...
नेप्सेमा हरियाली, यी हुन सक्छन् अब बजार बढ्ने आधार
काठमाण्डौ । धितोपत्र कारोबार हुने साताको दोस्रो दिन सोमबार सेयर...
अहिलेसम्म कति पर्यो एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रदमा आवेदन ?
काठमाण्डौ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद सेयरमा आज सोमबार बिहान...